सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित | My News Nepal
काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि संसदबाट पारित भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टीले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए पनि विपक्षमा मत नदिदा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।
फोरम नेपालका सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल र राजपा नेपालका सांसद अनिलकुमार झाले भने नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मानेनन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भएको स्वीकारेका थिए। ‘यो नीति तथा कार्यक्रम म स्वीकार गर्छु आकांक्षाहीन छैन। व्यक्तिको वैयक्तिक आकांक्षा जस्तो छैन। वृहत छ। राष्ट्रलाई पहिलो विश्वमा पुर्‍याउने आकांक्षा राख्न पाँइदैन ? कति वर्ष लाग्छ थाल्न त पर्‍यो नि हामीले। नेपाललाई गरिब रहन नपर्ने। केही वर्षभित्र खान लाउन छोराछोरी पढाउन पाइनँ भन्ने नेपाली नहोस्।
म दोस्रो नागरिकको अनुभूति गर्नुपर्‍यो भन्ने स्थिति नहोस्,’ सम्बोधन गर्दै उनले भने–‘भूगोल हिसाबले संस्कृतिका हिसाबले म पछि परेँ वा पारिएँ भन्ने स्थिति नहोस्। त्यो हामीले गर्न खोजेका होऊ। कोही पनि म अधिकारविहीन भएँ भन्ने मेरा स्वतन्त्रता र न्याय प्राप्त गर्ने हक। शोषणबाट उन्मुक्ति पाउने हकबाट बञ्चित भएँ भन्ने अवस्था नहोस्। कसैले पनि अधिकार त दिइयो तर बाटो मौका पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस्। यसकारण हामीले यी काम गर्नका लागि आकांक्षाहीन चल्ते चलाते सधैँजस्तो गरी आएकै गरी कर्मकाण्ड फेरि पुर्‍याउनु।’
सरकारले असम्भव महत्त्वकांक्षा नलिएको उनले जिकिर गर्दै उनले भने–‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमा केन्द्रीत छ। दुखी नेपालीबाट सुखी नेपाली र गरिब नेपालबाट समृद्ध नेपाल। क्षेत्र विशेषको होइन। यसलाई ठूलै आकांक्षा भन्नुपर्छ। यस आकांक्षालाई पूरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ।’